सेयर बजारमा झिनो सुधार, कहिले भित्रिएलान् ठूला लगानीकर्ता ? – Clickmandu
सेयर बजारमा झिनो सुधार, कहिले भित्रिएलान् ठूला लगानीकर्ता ?
क्लिकमान्डु २०७६ कार्तिक २८ गते १५:३७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । लामो समयदेखि उतार चढावमा रहेको सेयर बजारमा बिहीबार पनि उतार चढाव नै देखिएको छ । पछिल्लो समयमा सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आउने गरेको छ ।
बजारमा निरन्तर गिरावट आउनुलाई ठूला लगानीकर्ताको अभावको रुपमा हेरिएको छ । सेयर लगानीकर्ता बजारबाट ठूला लगानीकर्ता बाहिरिएका कारण बजारमा गिरावट आएको बताउन थालेका छन् । एक लगानीकर्ताका अनुसार सेयर बजारको लागि कात्तिक, मंसिर, पुस र माघ महिनालाई सेयर बजारको अफसिजनको रुपमा लिने गरिन्छ ।
यो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहिलो र दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण आउने गर्दछ । दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण आएपछि भने बजारमा ठूला लगानीकर्ता विस्तारै बजारमा आउने लगानीकर्ताहरु बताउँछन । यति बेला अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आवको लाभांश घोषणा गरिसकेका छन् । केही गर्ने क्रममा रहेका छन् । तरपनि बजारले अपेक्षाकृत सुधार गर्न सकेको छैन ।
बिहीबार नेप्से मापन गर्ने सूचक ०.७९ अंकले बढेर ११३५.९५ बिन्दुमा रोकिएको छ । १६३ कम्पनीको ८ लाख ३३ हजार ८८१ क्रित्ता सेयर २२ करोड ८३ लाख ५७ हजार ४९३ रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । १२ वटा समूहको कारोबारमा बैंकिङ १.३८, निर्जीबन बीमा कम्पनी ८.७६, जीवन बीमा कम्पनीको उपसूचक १३.५९ अंकले बढेको छ ।
कारोबार रकमको आधारमा एनएमबी बैंक अग्रस्थानमा देखिएको छ । बैंकको ४ करोड २९ लाख ६८ हजार ३७ रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः नेपाल बैंक र हिमालयन डिसिटलरी रहेका छन् ।
बिहीबारको कारोबारमा साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन, पाँचथर पावर कम्पनी, गुडविल फाइनान्स, राधी विद्युत कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् भने ग्लोबल आईएमई समुन्नत स्किम–१, आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी, रिडी हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् ।
सीडीएससीको सीइओ बन्न ७ जनाको आवेदन
सबै म्यूचुअल फण्डलाई करको दायरामा ल्याउनुः महालेखापरीक्षक
एफपीओमा आर्थिक अनियमिता भएको महालेखापरीक्षक कार्यालयको निचोड
दोहोरो अंकको सुधारसँगै सकियो चालु आवको सेयर कारोबार, १ वर्षमा १०३ अंकको सुधार